How to Use Noun and Articles နာမ်ပုဒ်နှင့် နာမ်ညွှန်းစကားအသုံးပြုနည်း ~ ELS, English Language School (Kyaukroe Village) (အင်္ဂလိပ်စာ စာသင်ကျောင်း (ကျောက်ရိုးရွာ)
How to Use Noun and Articles နာမ်ပုဒ်နှင့် နာမ်ညွှန်းစကားအသုံးပြုနည်း
How to Use Noun and Articles - နာမ်ပုဒ်နှင့် နာမ်ညွှန်းစကားအသုံးပြုနည်း
A, an, the ကို Articles (နာမ်ညွှန်စကား)ဟုခေါ်သည်။ Articles ကို ဤနေရာတွင် အနည်းသာဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ကို နောက်ဆက်တွဲကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြပါမည်။ a, နှင့် an ကို ‘Indefinite Article’ (မတိကျသော နာမ်ညွှန်းစကား) ဟုခေါ်ပြီး၊ ‘the’ ကို ‘Definite Article’ (တိကျသော နာမ်ညွှန်းစကား)ဟုခေါ်သည်။
Articles အသုံးပြုနည်း ဥပဒေကြမ်းသုံးရပ်
. Uncountable Noun (C.N) “ရေတွက်၍မရသောနာမ်ပုဒ်များ” ကို ဝါကျတွင်
(က) ပထမဆုံးသုံးသောအခါ Article မပါပဲသုံးသည်။ (water, milk, sand, etc)
(ခ) ဒုတိယ၊ တတိယဝါကျတွင်ပြန်သုံးသောအခါ ‘the’ နှင့်တွဲသုံးသည်။ (the water, the milk, ect.)
(ဂ) သိပြီးသော နာမ်ပုဒ်ဟူသမျှကိုညွှန်းဆိုရာင်တွင်၎င်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသာရှိသော နာမ်ပုဒ်နှင့် တောတောင်၊ ပင်လယ်စသည်ကိုညွှန်းဆိုရာတို့၌လည်း ‘the’ ကိုသုံးသည်။ ( the Bay of Bengal, the Kaladan River, etc.)
. Countable Noun (C.N) “ရေတွက်၍ရသော” ဗဟုဝုစ် နာမ်ပုဒ်များကို ဝါကျတွင်
(က) ပထမဆုံးသုံးသောအခါ Article မပါပဲသုံးသည်။ (books, boys, etc.)
(ခ) ဒုတိယ၊ တတိယ ဝါကျတွင်ပြန်သုံးသောအခါ ‘the’ နှင့်တွဲသုံးသည်။ (the books, the boys, etc.)
. Countable Noun (C.N) “ရေတွက်၍ရသော” ဧကဝုစ်နာမ်များတွင်
(က) အများထဲမှ တစ်ခုကို ‘a, an’ တစ်ခုခုနှင့်အမြဲတွဲရသည်။ (abook, an ox, etc.)
(ခ) ထိုနေရာတဝိုက်၌ တစ်ယောက်တစ်ခုတည်းသာရှိသောအခါ ‘the’ ဖြင့်တွဲသုံးရသည်။ (the book, the boy, etc.)
1. Countable Noun (C.N) ဧကဝုစ်ကို ‘a, an, the’ တစ်ခုခုမပါပဲသုံးကမှားသည်။ ထိုကြောင့် Countable Noun (C.N) ရှေ့တွင် ‘a, an, the’ တစ်ခုခုအမြဲပါရသည်။ ( a, an, the + C.N)
2. Article မပါဘဲသုံးထားသော 1 (က) နှင့်2(က) တို့ကို Zero Article ဖြင့်သုံးသည်ဟုလည်း ပြောဆိုကြသည်။
How to Use the Articles – ‘a, an’
A နှင့် An အာတီကယ် (နာမ်ညွှန်း)ကို အသုံးပြုပုံ
1. Consonant Sound (ဗျည်းသံ) ဖြင့်စသော Countable Noun ဧကဝုစ်နာမ်ရှေ့တွင် ‘a’ ကိုသာသုံးရသည်။
A useful diary
2. Vowel Sound (သရသံ)ဖြင့် စသော Countable Noun ဧကဝုစ်ကိန်းရှေ့တွင် ‘an’ ကိုသာသုံးရသည်။
( ‘အွန်၊ အပ်၊ အော၊ အာ၊ အွတ်၊ အမ်/အန်၊ အက်၊ အို၊ အီး၊ အု၊ အွိုင်း၊ အော’ စသည်တို့ကို သရသံ ဟုခေါ်သည်။)
An Oil Watch Group
An honoring certificate
An FBI officer
Note: ‘A,E,F,H,I,M,N,O,R,S,X တို့ဖြင့်စသော Abbreviation ရှေ့တွင်လည်း an ကိုထည့်
Abbreviation : M.A – Master of Art, S.A.T – Senior Assistant Teacher, J.A.T – Junior Assistant Teacher, P.A.T – Primary Assistant Teacher, NATO - North Atlantic Treaty Organization, FBI - Federal Bureau of Investigation, MP - Member of ˈ Parliament, FA - Football Association, IPA - International Phonetic Alphabet, OPEC- Organization of Petroleum Exporting Countries
အောက်ပါဧကဝုစ် Countable Noun များရှေ့တွင် ‘an’ သို့မဟုတ် ‘a’ ကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ထည့်ပေးပါ။
…one legged man
Articles-A-An-The, English Grammar, အင်္ဂလိပ်စာသင်္ခန်းစာ, အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ